Susa isikhonzi esikrinini sokukhiya | Izindaba zamagajethi
Ungasusa kanjani igama le-opharetha kusikrini sokukhiya ku-Android Lollipop
Impela lokho abanye benu bazibuza ukuthi yini okudingeka ubheke kuyo igama lomqhubi usuku lonke uma uvula isihenqo sefoni yakho. Usuyazi ukuthi yimuphi opharetha wakho onalawo ma-invoice afika njalo ngenyanga ngakho-ke asikho isidingo sokuthi sibe nalelo gama lapho esikrinini sokukhiya.
Nge-Android Lollipop, okungenani ibonakala kuphela kulesi sikrini, ngakho-ke lesi sifundo esincane sizokusiza ukususa igama lomqhubi futhi ngaleyo ndlela ube nalelo lokhi elihlanzekile nelifanele ezinye izinhlobo zezidingo, noma kungani kungenjalo, alikho.
1 Ungasusa kanjani igama le-opharetha esikrinini sokukhiya
Ungasusa kanjani igama le-opharetha esikrinini sokukhiya
Lokhu kufundisa okuncane kuyi- yenzelwe amadivayisi anezimpande amalungelo njengoba singakwazanga ukufaka imodyuli yeXposer edingekayo ngokuphelele ukususa igama le-opharetha kukhiye wesikrini.
Un Idivayisi ye-Android ene-ROOT
I-Xposer Framework efakwe ku-Android 5.0
Kuvuliwe "Imithombo engaziwa" kusuka kuzilungiselelo> Ezokuphepha
Sizokwenza isinyathelo se- faka imodyuli ethi "Fihla Inkampani Yelebuli" kusuka kunjiniyela uNadeem Sultan. Siyilanda kusuka ku- lesi sixhumanisi. Lapho ukufakwa sekuqediwe kufanele uqiniseke ukuthi imodyuli iyasebenza.
Lapho nje sengisebenza ungangena esikrinini sokukhiya ukuqinisekisa ukuthi sinyamalale igama le-opharetha ngale module ye-Xposed. Kumele kuqashelwe ukuthi le module ayidingi ukuguqula noma yini. Emifanekisweni eyisibonelo yokuthi le module isebenza kanjani, ungabona ukuthi isihloko esithi "Alikho ikhadi le-SIM - Izingcingo eziphuthumayo kuphela" sinyamalale kanjani, okusho ukuthi i-Xposed eyenziwe yasebenza.
Enye yaleyo mininingwane engasho lutho ukuthi kubasebenzisi abathile kungaba inkinga ukuthola igama lomqhubi wabo usuku lonke njengengxenye yesikhangiso samahhala esibanikeza sona.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Ungasusa kanjani igama le-opharetha kusikrini sokukhiya ku-Android Lollipop
jaime triana kusho
Ubusuku obuhle, ngine-zte blade a410 ene-lollipop 5.1 futhi ngifuna ukususa i-logo ye-opharetha lapho ngivula ifoni, kulokhu i-digitel venezuela, sengivele ngikususile i-bootanimation nezinhlelo zokusebenza ezifakwa yi-opharetha, angizitholi indlela yokususa lesi sikhangiso esicasulayo, ungangisiza ???
Phendula ku-jaime triana
Ezinye izindlela ezinhlanu zezingcingo zezwi zeWhatsApp
AbakwaSamsung bayeke ngokuphelele ukubuyekeza ku-Android 5.0 ye-Galaxy S4 ne-S5 yayo